I-Canvas Hammock Chair Swing Indoor Camping Stripe Portable Hammock Hanging Bed
Usayizi: 100 * 130cm
Isisindo somkhiqizo: 150 kg
Umbala: A: Oluhlaza/B: Uthingo/C: Imichilo eluhlaza okwesibhakabhaka/D: Emhlophe
Thola induduzo ngokushwibeka kwe-hammock esesitayeleni - hambisa kalula noma nini, noma kuphi-i-balcony, umpheme, igceke elingemuva, indawo yokulala nezinye izinsiza eziningi.
Ifanele ukuzulazula nokugoba ku-hammock enethezekile ngenkathi ufunda incwadi, imagazini noma ithebhulethi-lalela umsindo wemvula, amakhilikithi, iculo lezinyoni noma ujabulele ubusuku obunokuthula bokubuka izinkanyezi.
Imisebenzi yangaphakathi/yangaphandle-yangaphandle otshanini bakho obunomthunzi, igumbi lelanga noma kuvulandi phakathi kwezihlahla ezimbili.
I-Stylish DESIGN-Lesi sihlalo se-hammock senziwe ngokotini owenziwe ngezandla ongu-100%, idizayini yakudala eyalukiweyo inethezekile futhi isekela ngokwedlulele, futhi imininingwane ye-macrame inikeza ukusonteka kwesimanje kokwakudala.
Usayizi wesihlalo unikeza indawo eningi yokuphumula.I-cushion ifakiwe, isihlalo se-hammock sizokwenza uzizwe sengathi uhlezi phezu kwefu.
IPHEPHILE FUTHI IQINILE-Izintambo eziwugqinsi zikakotini namaketango ensimbi ephambili aqine ngendlela engase abe ngayo, lokhu kushwibeka kwesihlalo esilengayo kungasekela isisindo esingafika ku-265lbs.Ububanzi beshubhu lensimbi , amapayipi ensimbi anesisindo esisindayo angavimbela isitulo ukuthi singaguquki noma siboleke futhi abambe isisindo esindayo kunesivamile.
I-hammock kulula ukuyigcina, ingasindi, iqinile futhi inethezekile.
Ungayisebenzisa ngaphambi kwegceke, igceke elingemuva noma ithala, ingadi, endlini, ukukhempa, ukuzingela, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba, njll.
Le hammock yenziwe ngendwangu eqinile enomklamo womugqa.
Okwedlule: I-Canvas Hammock Portable Hammock Itende langaphandle I-Garden Swing Hanging Chair
Olandelayo: I-Camping Tent Kulula Ukuyifaka I-1Layer Ye-Anti-Ultraviolet Treatment I-Windproof Beach Ekhuphuka Ngesikhwama
I-Portable Hammock Hanging Bed
Imishini Esebenza Kaningi Esebenza Ngama-Mini Steppers...
Intambo Yokugxuma Entsha Yohlobo Olusha Yeqa Intambo Ayinazintambo...
Isihlalo Esigoqekayo Sesitulo Esihoxisayo Ukukhempa Kwangaphandle...
I-Push Up Bar Stands Handle Workout Yejimu Yasekhaya ...
Intambo Ye-Aerial Yoga Yelula Ukuhlukaniswa Komlenze...